Warar Goos goos ah. Ruunkinet 04/12/2009
DKMG, Puntland, Somaliland iyo caalamka oo cambaareeyay weerarkii qarax ee Muqdisho shalay lagu laayay dadka indhaha u ah bulshada
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya,ayaa weeraradii arxan darrada ahaa ee shalay lagu laayay dad aan waxba galabsan oo indhaha bulshada ahaa, ku tilmaamay inay ka dambeeyaan dano shisheeye, islamarkaasina waxa uu sheegay in uu cambaareynaayo.
Madaxweynaha oo hadlay saacado ka dib markii qaraxa ismiidaaminta lagu dilay seddex wasiir oo muhiim ahaa, ayaa isagoo ka muuqata dareen murageed waxa uu sidoo kale tacsiyo u diray dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladdii ay ka geeriyoodeen wasiirada, tacliinta iyo hiddaha sare, kan waxbarashada iyo caafimaadka, kuwaas oo dhamaantooda ahaa aqoon yahanno ay weysay dal xukunkii sharciga lagu badalay xukunka qoriga.
Wasirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya, ayaa weerarka ku eedeeyay xoogaga mucaaradka dowladda ka soo horjeeda, waxana uu sheegay Sheekh C/qaadir Cali Cumar inaanay haba yaraatee waxba u dhimi doonin falkaasi howlaha ay shacabka u hayaan.
Afhayeen u hadlay Alshabaab, ayaa beeniyay inay iyaga weerarka ka dambeeyaan, waxana uu ku eedeeyay in weerarkaasi ay geysteen isla dad ka tirsan dowladda Soomaaliya sida uu yiri.
Kaliya kuma koobna dadka cambaareeyay weerarkaasi arxan darrada ahaa oo sidoo kale lagu laayay wariyayaal iyo ardey xilligan dhibaatada badan Soomaaliya ka qalanjabinaayay jaamacadda Banaadir ee Muqdisho, madaxda dowladda Soomaaliya, waxa sidoo kale cambaareeyay maamulada Puntland iyo Soomaaliland.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee Kulmiye Axmed Max'ed Siilaanyo oo xalay warbaahinta Muqdisho la so xariiray, ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay weerarkaasi argagixiso iyo cidda geysatay, isagoo sidoo kalena tacsiyo u diray ehaladii dhamaan dadkii ku wax yeelloobay weerarkaasi.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Max'ed Faroole, ayaa isna sheegay in haddii aanay dunida gar gaar la soo gaarin Soomaalida ay dhibaatada dalal kale ku baahi doonto.
Md. Farroole, ayaa cambaareeyay cidda weerarka ka dambeysa isagoo tacsiyana dirray.
Si kastaba ha'ahaatee nin isku soo ekeysiiyay dumar oo walxaha qarxa iska soo buuxiyay ayaa shalay isku qarxiyay xarunta Hotelka Shaamo halkas oo xaflad qalanjabineed ardey Soomaaliyeed uga socotay, waxana xafladaasi lagu casuumay madax dowladda Soomaaliya ka tirsan kuwas oo goobta ku dhintay.
M/Afrika, QM, dalalka Jabuuti iyo Itoobiya,ayaa si isku mid ah u cambareeyay weerarkaasi shalay dadka lagu laayay.
Dadka qaraxaasi ku dhintay, ayaa la sheegay inay sii kordhayaan iyadoo in ka badan 28 ruux ay hadda sii caga cageyneyso dhimashada dhaawacana in ka badan 60 oo isugu jira, ardeydii qalanjibineysay, Profesaro iyo dhaqaatiir.
Waa mid ka mid ah, dhacdooyinii ugu xanuunka badnaa ee abadi kadhaca magaalada Muqdisho inta la xasuusto, halkaas oo aanay ka jirin maamul adag oo amaanka dadweynaha suga.
Madaxdii ku dhimatay weerarkaasi argagixiso ee shalay, ayaa maanta lagu wadaa in aas qaran loogu sameeyo magaalada Muqdisho,iyadoo dadkii kale iyo wariyayaashii ku dhintay qaraxaasina isla shalay galinkii dambe Muqdisho lagu aasay.
Burcad badeed sii daayay markab Jarmalka laga lahaa
Kooxo burcad badeed ah oo heystay markab laga lahaa dalka Jarmalka ayaa sii daayay iyagoo qaatay lacago madaxfurasho ah oo ay dalbanayeen tan iyo June-tii la soo dhaafay markaas oo ay markabka qafaasheen.
Markabka MV Charelle iyo shaqaalihii saarnaa oo aan caddad dhab ah laga heyn, ay hadda joogaan meel amaan ah sida ay sheegeen ciidamada badda ee midowga Yurub ku sugan xeebaha Soomaaliya.
Lama sheegin caddada lacageed ee ay madaxfurasho ahaan u qaateen burcad badeedka.
Burcad badeedda, ayaa ballaariyay isku daygooda qafaalasho, waxana ay marar badan ay maraakiib iyo doonyo ganacsi ka soo qafasheen xeebaha Soomaaliya iyo kuwa ka baxsanba kuwaas oo dabadeedna lacago madaxfurasho ka qaata shirkadaha ama dalalka ay ka soojeedaan dadka iyo maraakiibta ay qabsadaan.